Eminyakeni yamuva, i-Russia isibe esephepheni ethandwa kakhulu utshwala. Khimki kwaba okufanayo. Isidingo imitholampilo ukwelashwa ochwepheshe izidakamizwa. Inqubo ukuqeda kwencika zingenziwa ekhaya. Ukwelashwa nokuvikelwa utshwala ngokweqile kuzo Khimki olwenziwa ubusuku nemini, bagcine degree esiphezulu, beqinisekisa ukungamethembi uRamaphosa. Udokotela ilungele uthintane nganoma yisiphi isikhathi, uma iqembu kudingekile op luhamba esigulini.
Ukususa ukuncika ucingo
Ngoba indoda bazibandakanya emsebenzini owodwa owenziwe umphakathi, lokhu ka lo mkhuba wakhe ayidingeki. Ubheka indlela yokuphuma. Bust ukudakwa akukuniki isikhathi Sober up bese uthole ukusebenza. Hike emtholampilo babhebhethekisa lesi simo, kodwa ngaphandle kosizo iziqubu ukuphuza bedelelekile ngenxa yokuthi abazange sibuyele esimweni salo esivamile.
Brigade eliholwa narcologist ngokushesha ukubuyela ezempilo, usebenzisa wazama futhi ihlolwe izindlela ephumelelayo nokwelashwa kweziguli etshwaleni. Ukuze izindlela zokwelapha zisebenza ngentuthuko yakamuva, imikhiqizo ihlolwe izikhathi eziningi, ngakho babe inombolo okungenani engemihle. Ukuze umuntu ngamunye akhethiwe indlela siqu kukhethwa indlela yokwelapha. Okwenziwe bayophenywa temlomo, uma kunesidingo, kuyo leyo ndawo eyenziwa yokungezwani komzimba ukuhlolwa emuthini. Narcologist ukukhethela Indlela esheshayo isiqinisekiso egcwele yi.
Yiziphi izinhlobo zokwelapha ezikhona?
Labetibambile kukhethwa isiguli esilandelayo ukwelashwa:
ucingo esephepheni ukudakwa (Khimki futhi ezindaweni ezakhelene);
ukwelashwa endaweni esibhedlela;
usizo lochwepheshe nge iziqubu ukuphuza (engasindi futhi isikhathi eside);
nokuvulwa umzimba ngemva ukuluthwa utshwala isikhathi eside.
izindlela ezisetshenzisiwe yokuthola iziqubu ukuphuza:
Coding indlela ngokufaka torpedo "Esperal" noma "Naltrexone".
Buyela impilo weThrojani yasekuqaleni, okuhlanganisa nezidakamizwa iwukudambisa acetaldehyde emzimbeni, kanye namavithamini. On ngokubona wezifo zengqondo sika njengoba umbono base kuyakhethwa nosawoti: glucose, gemodez noma nosawoti.
Ukwakheka amaqembu usizo kungafaka owelapha ku izifiso zesiguli.
amalungiselelo Eminye Hangover ukulimaza, isuswe breaking emzimbeni.
Kukhona kungenzeka ukuvuselelwa emtholampilo ngaphansi ebhekiwe kwabasebenzi. Lokhu sinezici eziningi ezinhle:
Ngo amafomu okunzima ukubuya ngesikhathi iziqubu ukuphuza - inqubo eside. Kukhona kungenzeka yezinkinga ngesikhathi nokuvuselelwa. Ifaka ikhodi zokusetshenziswa kabi kotshwala ekhaya kufanele sifake ucwaningo kwangaphambilini ku yisishiso zamanje kanye nezifo ezingamahlala khona. Olunye uvivinyo kanye nezinqubo zitholakala kuphela isibhedlela.
Umtholampilo izidakamizwa isiguli e wobungane, aqede kungenzeka ukucindezeleka.
Uma udinga usizo nge ukuwohloka kwempilo, ke abanye uyophathwa yokutakula op.
Ifaka ikhodi zokusetshenziswa kabi kotshwala ekhaya akulula ngaso sonke isikhathi: izihlobo awahloniphi kuthule ekhaya. Ngokuvamile isiguli ibusa utshwala ngesikhatsi ukwelashwa.
Indlela ephumelelayo okukhipha kusukela ukuzitika ziconsa. Izinzuzo:
Inqubo kuthatha imizuzu embalwa.
Jwayelekile blood pressure, amanzi silinganisele agcwaliswa.
Ethanol molecule ubhujiswe ngokushesha, umuthi yethulwa, ngokudlula ipheshana wokugaya ukudla. Kunciphisa umthwalo phezu kwesibindi.
Ngemva econsa isiguli ezumeka. Uma silele, elikhishiwe kwezinye izinguqulo isimo jikelele, ekuseni Siyaqiniseka ajabule futhi iphango enempilo.
Ngokushesha ubalekela reflex Gag, izidakamizwa ukunciphisa ikhanda.
Akukona ahlupheke isimiso sezinzwa of a Hangover esindayo.
Lapho imiphumela ukuzitika ezenziwe zendawo, futhi ethanol saphela nethonya, esephepheni wenziwa ukudakwa. Khimki banezidingo nokuvuselelwa isikhungo sabo. Zonke izinqubo ukuqeda kwencika oludakayo abazenzi kuphela imvume ebhaliwe isiguli. Ngaphandle kwalokhu, amathuba okuphumelela alikho.
Iziguli abanesifiso sokwazi ukuthi esephepheni wenziwa utshwala. Khimki zikhokhelwa zezikhungo zokuhlumelelisa, ukwelashwa kusiza ukuqeda ezinye izinkinga esikhathini imithi khulula:
Ngokushesha inikeza uhla egcwele services, ukungabi emigqeni omkhulu.
Ngaphandle House ifaniswe ehhotela.
abasebenzi nobungane Umlutha oqeqeshiwe.
Isiqinisekiso imfihlo ngokuphelele kuyakuyiswa eqinisekisiwe ngokubhala.
Inqubo esephepheni Kwenziwa ngu Dovzhenko lokuthunga torpedo. izidakamizwa ezisetshenzisiwe ngesisekelo "Disulfiram". Sebenzisa futhi "Vivitrol", "Algominal". I okufana ukwelashwa ingqondo. ingxoxo olwandulelayo phambi wekhodi kusekelwe inkolelo lesiguli e izingozi utshwala reception. Ukulandela ukufakwa Kwenziwa esasikhipha a nomuthi okuyinto ebucayi kuya molecule ethanol. I chemical obujwayelekile phansi kwesikhumba. Ngemva Ukuvalwa izinqubo kwenziwe ukuhlolwa kwangaphambilini ebukhoneni udokotela.
Inkemba Damocles. okusho phraseologism